Google waa markale, mudo gaaban, shirkada ugu qiimaha badan | Wararka IPhone
Google mar kale waxay dhaaftay Apple (iyo Apple mar kale Google) oo ah shirkadda ugu qiimaha badan adduunka
Bilowga sanadka, Google, oo hadda loo yaqaan Xarfaha alifbeetada ayaa ka sare maray Apple oo ah shirkadda adduunka ugu qiimaha badanLaakiin maalmo yar ka dib Apple ayaa mar kale ka kor martay shirkadda fadhigeedu yahay Mountain View, farxadda dadka deriska la ah Google muddo kooban ayey sii jirtay. Tan iyo markii ay Apple soo bandhigi doonto natiijooyinkii ugu dambeeyay ee maaliyadeed rubucii maaliyadeed ee ugu dambeeyay, saamiyada shirkadda ayaa hoos u dhacay oo kaliya dhowrna waa maal gashadeyaashii iibiyey dhammaan jagooyinkii ay ku lahaayeen shirkadda, sida Carl Ichan iyo David Tepper, wixii aan horey u haysannay. si dhakhso leh ayaan kuugu wargaliyay.
Dhowr maalmood ka hor Forbes waxay soo saartay kala sooc cusub oo aan ku arki karno sida Apple ay u noqotay shirkadda ugu qiimaha badan adduunka, iyadoo qiimeheeda lagu qiyaasay 155.000 milyan oo doolar, waxyar ka yar labanlaabka Google. Laakiin Qaabka Forbes ee xisaabinta qiimaha shirkadaha la mid maaha suuqa saamiyada. Haddii aad eegto wadarta qiimaha saamiga shirkadda Google, waxay ka fiicnaanaysaa shirkadda ku saleysan Cupertino. Waxyaabaha dhaqaalaha.
Hoos u dhaca ku yimid qiimaha saamiga shirkada ayaa sababay qiimaha shirkaddu waa $ 494.000 bilyan, halka saamiyada Alphabet maanta waxay noo fidinayaan lacag ka sarreysa 4.000 milyan, taas oo ah, 498.000 milyan oo doolar. Tan iyo markii la soo bandhigay natiijooyinka Apple, qiimaha saamiyadu wuxuu hoos ugu dhacay qiyaastii $ 15, isagoo gaadhay ku dhowaad $ 90, markii bilihii u dambeeyay ay had iyo jeer ku dhowaanaysay 11-ka.
Si loo isku dayo in la dajiyo biyaha xoogaa, Tim Cook ayaa dhowr toddobaad ka hor ku dhawaaqay in qalabka soo socda ee ay shirkaddu soo bandhigi doonto waxay na siin doonaan tabo cusub oo teknoloji ah oo aynaan ogayn sidaan ugu noolaan karnay. Waxay horeyba u laheyd inay soo bandhigto wax cusub oo Apple ah si ay uga adkaato tirooyinka iibka hooseeya ee soo maray rubucii la soo dhaafay taasna waxay u muuqataa inay saameyneyso dhammaan soo saarayaasha aaladaha dhamaadka sare.
Cusboonaysii: taajka madaxa alifbeetada ma raagin muddo dheer. Xogtii ugu dambaysay waxay sheegaysaa in Apple mar labaad tahay shirkadda ugu qiimaha badan meeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Google mar kale waxay dhaaftay Apple (iyo Apple mar kale Google) oo ah shirkadda ugu qiimaha badan adduunka
Juan Portatiles gacan labaad dijo
Dagaalka daa’imiska ah ee u dhexeeya kooxda weyn ee teknolojiyadda ... Tartanku waa mid caafimaad qaba.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka.
Jawaab Juan Portatiles gacanta labaad
Ma fahmin warkan la daabacay seddex saac ka hor markii shalay uu xirmay Wall Street qiimaha Apple wuxuu ahaa 514,2 Md iyo kan Google 491,9 Md ... Waa maxay suuqa saamiyada?
Jawaab Javier Jiménez
IOS 9.3.2 xiriiriyeyaasha soo dejinta
Meesha Malaa'igtu Ooyaan oo laga heli karo si bilaash ah wakhti xaddidan